Ny hatsaran-tarehy manjavozavon’ireo tendrombohitra manga ao Jamaika, azo sary · Global Voices teny Malagasy
Fifaninanana saripika ho fankalazana ny faha-28 taonan'ilay Valanjavaboary nasiônaly malaza
Voadika ny 09 Marsa 2021 11:53 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, عربي, українська, 日本語, English
Ho an'ireo mpitsidika ireo Tendrombohitra Manga malaza ao Jamaika, isaky ny mihodina, dia toy ny misy hatrany toerana tsara fitahiry an-tsary. Ilay tendrombohitra mikintaontaona, rakotra ala no mibahan-toerana ery amin'ny fara-vodilanitr'i Kingwton renivohitra, miendrika tampon-kavoana manaraka ny halavan'ny tapany afovoany sy atsinanana amin'ilay nosy. Hita amin'io tandavan-ntendrombohitra io ny tendro avo indrindra ao Jamaika, Ny Tampon'ny Tendrombohitra Manga (2.256 metatra, manodidina ny 7402 feet).
Tamin'ny 1993 no nahazo hosotra ilay Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow, ary taona roa taorian'ny nanaovan'ny Jamaica Conservation and Development Trust (JCDT) — fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ara-bola izay mitantana ilay faritra — ny fanakalozana trosa voalohany indrindra ho takalon'ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana tany amin'ny faritra Karaiba miteny anglisy niaraka tamin'ny fanampian'ny USAID, Conservation Trust of Puerto Rico ary ny Nature Conservancy.
Tamin'ny 2015, nosoratana ho isan'ireo Toerana Lova Erantany ao amin'ny UNESCO ny Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow, hetsika iray noraisina ho toy ny fanekena ny lanjan'ireo lova voajanahary sy ara-kolontsaina ao aminy.
Amin'ity taona ity, manamarika ny faha-28 taonany ilay Valanjavaboary, nanapaka hevitra ny JCDT hampanao fifaninanana maka sary mba ho tsangambato fankalazàna, ka tamin'ny 28 Febroary no nambarany ny anaran'ireo nandresy. Isan'ny hita tao anatin'ireo mpitsara i Donnette Zacca, mpanorina ny Jamaica Photographic Society sy ilay mpakasary Gary Langley, izay monina any Angletera.
86 no isan'ireo fampidirana nifaninana ary nitsinjara tanaty sokajy telo: Tanora, Natiora ary Kolontsaina. Ny tena tanjona, hoy ny Tale Mpanatanteraky ny JCDT, Dr. Susan Otuokon, dia ny hamorona boky kanto (azo avadivadika eo ampisotroana kafe) anangonana ny sasantsasany amin'ireo sary tsara indrindra nandritra ilay fifaninanana.
Ho an'izao tontolo izao dia fialofana manandanja ho an'ny fifangaroanà zava-mananaina maro ilay ala mikitroka be zavona ao Jamaika. Mihoatra ny antsasany amin'ireo hazo mamelana ao amin'ilay valan-javaboary no tsy hita afa-tsy ao Jamaika, ary ampahatelony amin'ilay valan-javaboarim-pirenena mihitsy. Marobe tamin'ireo niditra nifaninana àry no nahitàna taratra an'io velarantany manjavozavo io, miaraka amin'ireo ampanga, lichens, bromeliads ary volonkazo mihantona eny amin'ireo hazo.
Ny Zaridaina Bôtanika Cinchona, manirery sy manan-tantara, noforonina tamin'ny 1868, no lohahevitra nomena ny toerana voalohany tao amin'ny sokajy Voary, sary nopihan'i Sherard Little. Nomena lohateny hoe “Fahanginana,” mampita endrika isankarazany ananan'ilay tendrombohitra, anatin'ny indray mipika monja: ireo havoana ao aminy, ny karazam-piainana tokamiavaka ao anatin'ilay tontolo tsy mahazatra misy ireo hazo sy zavamaniry manodidina, ny tantarany lavabe sy ny fiarahan'ny olombelona miaina amin'ny voary, samy avy amin'ny fijerin'ny indostria (sompitra) ary ny fitsirihana anaty (ilay latabatra be fiasàna).
Ara-tantara, ny Valanjavaboary Nasiônalin'ireo Tendrombohitra Manga sy Havoanan'i John Crow dia toeram-pialofana ho an'ireo andevo Maroons avy ao amin'ny Nosin-dRivotra (Windward Maroons) izay nandositra ny fanandevozana azy. Araka izany, ilay faritra dia mitahiry lova ara-kolontsaina mifandray mandrakariva amin'io tantaran-dry zareo io, isan'izany ireo lalankely, ireo toerana arkeôlôjika ary ireo vohitra samihafa. Taonjato maro aty aoriana, mbola feno tanjaka ny kolontsaina Maroon.
Ao anatin'ity saripika nahazo ny toerana fahatelo ity, an'i Peter-Ann Higgins, nalaina nandritra ny fiaretantory naharitra telo andro ho fanomezana voninahitra an'ilay mpitarika nankamamiana, Charlestown Maroons, Kôlônely Frank Lumsden, dia gumbe iray na amponga tapaka iray no nasandratra nandritra ilay lanonana.